Meksika : Mihira ho amin ‘ny fandriampahalemana sy ny rariny ny antoko mpihiran’ny Acteal · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Stephanie Camus
Voadika ny 21 Novambra 2018 3:35 GMT
Mpihira Amerikana Indiana, avy ao Atsimon’i Meksika ao amin’ny faritra ‘’tsoitsil’’ ao Chiapas, no mandrafitra ny antoko mpihiran’ny tananakelin’ny Acteal izay tsy manam-paharoa. Fomba hifandraisana mahavariana ity antoko mpihira ity. Tsy re firy any Meksika ny feon’ireo Amerikana Indiana, satria miaina amin’ny fahantrana isan’andro, ny mosary sy ny fanavakavahana ny ankamaroan’izy ireo, izay lohahevitra natao tao anatin’ireo hira izay hirain’izy ireo.
‘’Ny fitadiavana /fikatsahana ho amin’ny fandriampahalemana, ny fahamarinana ary ny filaminana ao amin’ny tanànakelinay sy manerana izao tontolo izao no hafatra ‘’. Nolazain’i Elena Gomez Santis ireo teny ireo, iray amin’ireo vehivavy mpihira ao amin’ity antoko mpihira ity, nandritra ny antsafa manokana niarahana taminy. Any amin’ny tanàna kely iray antsoina hoe : Naranjatic Bajo izy : ao amin’ny faritra ‘’Los Altos’’ izay nofaritan’ny bilaogy One Lucky Life ho : tanàndehibe iray voahodidin’ny tendrombohitra manana loko maitso isankarazany, ary ahitana ny rahona tena akaiky ka ahafahana mikasika azy ireo’
Nanazava i Jorge Sifuentes, izay miasa ao amin’ny gazety nasionaly La Jornada, fa ny antom-pisian’io antoko mpihira io voalohany tamin’ny taona 1996 dia ny hahatsiarovana amin’ny fomba fijery ara-pinoana ny fandikan-teny ny Baiboly ho ‘’tsotsil’ izay fiteniny.
Na izany na tsy izany anefa dia nahita iraka vaovao indray ny antokom-pihira taorian’ny Vonoan’olona tao Acteal. Novonoin’ny tafika Meksikana tao amin’ny fiangonana iray ny Amerikana Indiana miisa 45, tao amin’ny renivohitra iray hafa tao amin’ny faritry ‘’Los Altos’’ io ihany, tany Acteal, tamin’ny taona 1997. Nanomboka nitaky tamin’ny alalan’ny hirany, ny rariny avy amin’ny governemanta ny antoko mpihira taorian’ity vonoan’olona ity ; io ihany koa no fomba iray entina hisarihana ny saina tamin’ny zava-nitranga tao amin’ity faritra ity. Mbola tsy nahitana ny rariny anefa izany hatramin'izao.
Nanatrika ny fahatsiarovana tao San Cristobal de Las Casas, ny bilaogera Leobardo Alvardo, izay nanatrehan’ireo sisa velona sy ireo havana akaikin’ireo olona nivavaka tao nandritra ny famonoana. Nandray anjara tamin’ity fotoam-pivavahana ity ihany koa ny antoko mpihiran’ny Acteal :